Kormeerayaasha caalamiga ee doorashada Somaliland oo saxaafadda u warramay
posted on Saturday, November 11th, 17
Hargeysa (RH) Magaalada Hargeysa waxaa maanta shir jaraa’id ku qabtay kormeerayaasha caalamiga ee dusha kala soconaya doorashada Somaliland ee Isniinta dhaceysa.
Wax ka yer 27 saac ayaa ka harsan doorashada madaxtinimada ee Isniinta loo dareerayo, waxaana kormeerayaasha caalamka oo ka kooban lixdan xubnood ay shirkooda jaraa’id ku sheegeen in ay maanta u ambabaxayaan goballada Somaliland iyo guud ahaan deeggannada doorashada ay ka dhaceyso oo ah laga billaabi Seylac illaa iyo Laasacaanood.
Waxa ay sheegeen in ay u diyaargaroobeen sidii doorashada ay kor kala socon lahaayeen.
Dowladda Ingiriiska ayaa maalgalineysa kormeerayaasha caalamiga ee doorashada la soconaya.
Guddida doorashada Somaliland oo sheegay in la hakinayo baraha bulshada ay ku xiriirto
Ololaha doorashada Somaliland oo maanta ku eg, Isniinta doorasho ayaa loo dareerayaa
Somaliland ayaa sameesay taarikh waayo waa goobtii ugu horreysay oo qaarada Afrika ay ka dhacdo codbixin dadka ay isticmaalayaan tijnoolajiyadda casriga ah, gaar ahaan qalabka garan wajiyada dadka.
Doorashada ayaa la sheegay in ay ka qeybqaadanayaan wax ka badan 700,000 oo codbixiyeyaal.
Yaa ku loolamaya doorashada?
Doorashada Isniinta dhaceysa waxaa ku tartamaya saddex musharrax oo ka kala socda saddexda xisbi ee kala ah Kulmiye oo uu u sharaxanyahay Muuse Biixi Cabdi,Waddani oo uu u sharaxanyahay Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi (Cirro) iyo UCID oo uu u sharaxanyahay Faysal Cali Waraabe.
Ardayda Jaamacadaha ayaa loo tababbaray sidii ay uga qeybgali lahaayeen doorashada waxaa hadda loo kala diray goballada iyo tuulooyinka Somaliland, sidoo kale guddiga doorashada ayaa daad gureeyay sanaadiiqda codadka kuwaasoo laga qaaday xarrunta guddiga doorashada.
Si kastaba, doorashadan oo ah midii seddaxaad ee ka dhacda Somaliland tan iyo markii gooni isku taag ku dhawaaqday haddana waxaa aan doorweyn ku lahayn dumarka, tusaale aqalka baarlamaanka gabar qura ayaa ku jirta halka golaha wasiirada ay ku jiraan labo hablood.